Hakan Sukur: Xiddigii Turkiga ee hadda buugaagta iibiya markii ay isku dhaceen Erdogan - BBC News Somali
Hakan Sukur: Xiddigii Turkiga ee hadda buugaagta iibiya markii ay isku dhaceen Erdogan
Lahaanshaha sawirka BBC Sport/bbc
Image caption Sukur waa gool dhaliyihii ugu wanaagsanaa ee abid soo maray xulka qaranka Turkiga
Hakan Sukur waa gool-dhaliyihii ugu wanaagsanaa ee abid soo maray xulka qaranka Turkiga, wuxuuna sidoo kale ahaa mid ka mid ah gool dhaliyeyaashii loogu doon-doonista badnaa ee qaaradda Yurub.
Haddaba sidee buu rug caddaagan ugu dambeyntii ku noqday nin buugaagta iibiya oo sidoo kale taksiile ka ah Waddanka Mareykanka, isagoo waliba dibad joog ka ah waddankiisa?
Sida lagu sheegay wareysi uu siiyay wargeyska kasoo baxa dalka Jarmalka ee Welt am Sonntag, ciyaartoygan hore ee 48 jirka waxay noloshiisu isbaddal qeyrul caadi ah gashay tan iyo markii uu ciyaaraha ka fariistay sanadkii 2008-dii.
Wuxuu sheegay in khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, uu horseeday hanjabaado loogu jeediyay in la dili doono, sidoo kalena loo jeediyay eedeymo been abuur ah, lagana hor istaagay inuu dhaqaalihiisa isticmaalo.
'Wax ii haray ma jiro, Erdogan ayaa wax walba iga qaatay: xuquuqdii aan u laha inaan bulshada ku dhex jiro, xurriyaddeydii hadalka iyo xaqii aan u lahaa shaqooyinka", ayuu ku yiri wareysiga uu siiyay wargeyska.
Sukur wuxuu dhaliyay 51 gool, 112 kulan oo uu u saftay xulka Turkiga, intii u dhaxeysay 1992-kii ilaa 2007-dii. Wuxuu ka mid ahaa xulkii qaranka Turkiga ee kaalinta saddexaad ku dhameystay koobkii adduunka ee sanadkii 2002-dii.
Ciyaartoygan horay uga tirsanaan jiray kooxda Blackburn wuxuu xirfaddiisa ciyaaraha inta badan ku qaatay kooxda Galatasaray, waana ciyaaryahankii ugu goolsha badnaa ee abid soo mara horyaalka Super Lig ee ugu sarreeya dalka Turkiga.
Weerarka Turkiga ee Suuriya: Maxaa lagu heystaa ciyaartoyda Turkiga ee isree-reebka qaramada Yurub?
Image caption Sukur wuxuu dhaliyay 51 gool 112 jeer oo uu u ciyaaray xulka Turkiga
Ka dib markii uu ka fariista ciyaaraha kubadda cagta, wuxuu ku biiray siyaasadda.
Sanadkii 2011-kii, Sukur wuxuu ku guuleystay kursiga baarlamaanka Turkiga, isagoo xubin ka ah xisbiga Caddaaladda iyo Horumarka ee madaxweyne Erdogan.
Laakiin wuxuu sidoo kale xiriir la lahaa Fethullah Gulen, oo ah wadaad reer Turki ah oo kasoo horjeeda Erdogan.
Madaxweynaha Turkiga wuxuu wadaadkaas ku eedeeyay isku day afgambi oo uu dhiig ku daatay, oo Turkiga ka dhacay sanadkii 2016-kii.
Sukur oo wakhtigaas ku noolaa Mareykanka, ayaa lagu soo warramay inuu kasoo horjeestay afgambiga, laakiin sanadkii 2017-kii ayey warbaahinta dowladda Turkiga ku qeexday inuu yahay nin baxsad ah oo xubin ka ah ururka Fetullah, oo ay argagixiso u aqoonsan tahay xukuumadda Ankara.
Warka kasoo baxay warbaahinta dowladda ayaa lagu sheegay in ciyaartoygan uu ku noolyahay guri 3 malyan oo doolar ah, uuna leeyahay meherad qaxwada lagu cabo oo ku taalla xaafadda Palo Alto, "taasoo ah xaafadda ugu qanisan magaalada San Francisco".
Laakiin Sukur wuxuu wargeyska u sheegay arrin taas ka duwan.
"Waxaan u guuray Mareykanka, markii horena waxaan gobolka California ku lahaan jiray meherad lagu qaxweeno, balse markii ay dad qalaad kusoo bateen makhaayadda ayaan isaga tagay, hadda waxaan u shaqeeya gawaariga shirkadda taksiyada ee Uber, buugaagna waan iibiyaa", ayuu ku yiri wargeyska Welt am Sonntag.
Image caption Sukur wuxuu dhaliyay goolkii ugu dakhsada badnaa ee abid laga dhaliyo tartanka koobka adduunka, isagoo shabaqa kubbad dhex dhigay 11 ilbiriqsi gudahood, ciyaartii koobka adduunka ee 2002-dii oo ay isku arkeen xulka Kuuriyada Koonfureed.
Wuxuu sheegay in guryihii, ganacsiyadii iyo akoonadii bangi ee uu ku lahaa Turkiga ay la wareegtay dowladda Erdogan.
Wuxuu sidoo kale beeniyay inuu wax dambi ah galay.
"Ma jira qof sharrixi kara doorka aan ku lahaa afgambigaas", ayuu yiri Sukur, wuxuuna intaas ku daray: "Waligey ma sameynin wax sharci darro ah, ma ihi nin khiyaano qaran galay, mana ihi argagixiso".